वि.सं. २०७५ साल असोज २४ गते। बुधबार। – AstroSimara.Com
By Astro Sudeep Dhakal	 Last updated Oct 9, 2018
इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर १० तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ कौलाथ्व। आश्विन शुक्लपक्ष। तिथि– प्रतिपदा, ७:५९ बजेउप्रान्त द्वितीया। नक्षत्र– चित्रा, १२:४० बजेउप्रान्त स्वाती। योग– वैधृति, १४:३१ बजेउप्रान्त विष्कम्भ। करण– वव, ७:५९ बजेदेखि वालव, १९:३१ बजेउप्रान्त कौलव। आनन्दादिमा कालदण्ड योग। चन्द्रराशि– तुला। काठमाडौंमा सूर्योदय– ६:०१ बजे, सूर्यास्त– १७:३९ बजे र दिनमान २९ घडी ३ पला। घटस्थापना। शारदीय नवरात्रि आरम्भ। नलास्वने। घटस्थापनापूर्वक जमरा राख्ने साइत– प्रात: ७:१५ बजे।
आफ्नो झगडालु व्यवहारले तपाईंलाई शत्रुको सूचीमा थप्नेछ। तपाईंलाई कसैले यति धेरै क्रोधित नबनाओस जसले गर्दा तपाईंले पछि पछताउनु पर्ने हुन्छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद गर्नको लागि सही दिन। घरेलू घरधन्दामा आफ्नी पत्नीलाई उनको कार्यभार कम गर्न सहयोग गर्नुहोस्। यसले साझेदारी र आनन्दको लागि प्रोत्साहन दिनेछ। आफ्नो प्रियसँग वनभोजमा गएर आफ्नो बहुमूल्य समयलाई पुनर्जीवित गर्नुहोस्। आज तपाईंको मनमा आएका नयाँ पैसा बनाउने विचारको फाइदा लिनुहोस्। तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बोक्नुभएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। आफ्नो जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।
हँसिलो हुनुहोस् किनकि यो तपाईंका सबै समस्याहरूको लागि उत्तमा विष मार्ने औषघि हो। आर्थिक समस्याले तपाईंको निर्माणात्मक सोच्ने क्षमतामा हानि पुर्याउनेछ। आफन्त र साथीहरूबाट अप्रत्याशित उपहार र इनामहरू। तपाईंको उपस्थितिले तपाईंको प्रियलाई यो संसार बस्ने योग्य स्थान बनेको छ। नयाँ योजना र उद्यम लागू गर्नको लागि राम्रो दिन। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
स्वास्थ्य पूर्णत ठीक रहनेछ। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। पिताको कठोर व्यवहारले तपाईंलाई परेशान गराउन सक्छ। तर तपाईंले कुराहरू नियन्त्रणमा राख्न शान्तिपूर्ण व्यवहार गर्नु आवश्यक छ। तपाईंलाई यसबाट फाइदा हुनेछ। प्रेमी जीवन आज विवादास्पद हुन सक्छ। महत्वपूर्ण व्यापार निर्णय गर्दा अरूको दबाबमा नआउनुहोस्। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। आफ्नो जोडीको व्यवहारले आज तपाईंको व्यावसायिक सम्बन्धमा बाधा पर्न सक्छ
आफ्नो ऊर्जा संकटमा परेका कसैको मद्दत गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस – अरूको लागि कुनै प्रयोगमा आएन भने यो नश्वर शरीरको प्रयोजन छैन। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। तपाईंले प्रेम गर्नेहरूसँगको गलतफहमी समाधान हुनेछ। आज तपाईंले आफ्ना साथीको अनुपस्थितिमा उनको खुशबू महसुस गर्नु हुनेछ। तपाईं सबैको लागि आज धेरै सक्रिय र सामाजिक कार्य गर्ने राम्रो दिन हुनेछ – मानिसहरूले सल्लाहको लागि तपाईंको मुख हेर्नेछन् र तपाईंले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नेछन्। होसियारीसँग हिंड्नु पर्ने दिन – आज तपाईंको हृदयभन्दा मनको बढी आवश्यकता पर्नेछ। आज, तपाईं आफ्नो जीवनसाथीसँग बाहिर गएर रमाइलो समय सँगै बिताउनु हुनेछ।
डरको डरलाग्दो राक्षससँग लड्न आफ्नो विचारमा केही सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, अन्यथा तपाईं यो कट्टर भूतको निष्क्रिय र बेरहमी सिकार बन्नुहुनेछ। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। परिवारको दायित्वलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईंले लापरवाही गर्नुभयो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। आज आफ्नी प्रियतमासँग शिष्टतासाथ व्यवहार गर्नुहोस्। लघु अवधिका कार्यक्रममा आफुलाई संलग्न गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई नवीनतम प्रविधिहरू र कौशल सिक्न मद्दत गर्नेछ। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई जानीबुझी हानि पुर्याउन सक्छ, जसले तपाईंलाई केही समय दुखी राख्न सक्छ।
तपाईंको हंसमुख स्वभावले अरूलाई खुसी राख्नेछ। तपाईंलाई व्यापार क्रेडिटको दृष्टिकोणले भेट गर्न आउनेहरूको वास्ता नगर्नुहोस्। यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ। तपाईंको जीवन खुशी दिनाले र विगतका गल्तीका लागि क्षमा गर्नाले योग्य बनिदै जान्छ। संयुक्त उद्यम र भागीदारीबाट टाढा रहनुहोस्। कुनै तर्कमा परेर कठोर टिप्पणी दिनबाट बच्नुहोस्। नियमित वैवाहिक जीवनमा, यस दिनले स्वादिष्ट मिठाईको रूपमा कार्य गर्नेछ।
आज तपाईंसँग आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधारका कामहरू गर्न प्रशस्त समय हुनेछ।” अचल सम्पत्ति र वित्तीय कारोबारका लागि राम्रो दिन हो। योग्यहरूका लागि वैवाहिक साँठगाँठ हुनेछ। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध जादुले भरिएको हुनेछ; मात्रै यसलाई महसुस गर्नुहोस्। प्रमुख व्यापार सम्झौतामा बातचीत गर्दा आफ्नो भावना नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। तपाईंले आफुलाई दुनियामा सबैभन्दा धनी महसुस गर्नु हुनेछ किनकि तपाईंको जोडीले तपाईंलाई त्यस्तै व्यवहार गर्नेछन्।
मित्रहरूले सहयोग गर्नेछन् र तपाईंलाई खुसी राख्नेछन्। विभिन्न स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईंको तनाउ कम गर्नेछ। तपाईं पनि भागेदार हुनुहोस र मूक दर्शक जस्तो भएर नबस्नुहोस्। आफ्ना प्रेमको अनावश्यक माग गर्न छोड्नुहोस्। तपाईंले नयाँ व्यापार साझेदारीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने – त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिबद्धता गर्नु अघि हातमा सबै तथ्य प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ। टाढाको यात्रा आरामदायक हुनेछैन – तर महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बनाउन मद्दत गर्नेछ। आफन्तको कारणले आज झगडा हुने सम्भावना छ, तर दिनको अन्त्यमा सबैको राम्रोसँग समाधान हुनेछ।
तपाईंले सकारात्मक दृष्टिकोण र विश्वासले आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना छ। उचित प्रयोग गरेमा तपाईंको रचनात्मक प्रतिभा अत्यधिक आकर्षक साबित हुनेछ। साँझको लागि रोमाञ्चक योजना राखेर तपाईंका मित्रहरूले तपाईँको दिन रोशन गर्नेछन्। प्रेमीहरूको पारिवारिक भावना अत्यधिक विचारशील हुनेछ। काममा तपाईं सहकार्यकर्ताहरूले पनि गतिशील र प्रगतिशील परिवर्तन गर्न सहयोग गर्नेछन्। तपाईंले पनि तेज कार्य गर्न आफैलाई आधार दिनु आवश्यक छ। सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न अधिनस्थहरूलाई प्रेरणा दिनाले सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा मज्जा, खुशी र परम आनन्द आउनेछ।
सामाजिक जीवनको भन्दा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। कसैका लागि – परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनले उत्सव र पार्टी ल्याउँछ। आज रोमान्सको लागि कुनै आशा छैन। केही समयको लागि तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ – सहकर्मी / साथीहरू तपाईंको सहायता गर्न आउन सक्छन् – तर धेरै सहयोग प्रदान गर्न सक्षम हुने छैनन्। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। तपाईंलाई दिन राम्ररी बितोस् भन्ने लाग्छ भने, आफ्नो जोडीको मूड नराम्रो भएको बेला एक शब्द पनि नबोल्नुहोस्।
तपाईं दीर्घ रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। तपाईंको जोडीसँग आफ्नो गोप्य जानकारी साझेदारी गर्नु अघि सोच्नुहोस्। यदि सम्भव छ भने नभन्नुहोस् किनकि उनले अरू कसैलाई यो कुरा भन्न सक्छिन्। रोमान्स सुखद र अत्यधिक रोमाञ्चक हुनेछ। कुनै पनि संयुक्त उद्यममा प्रवेश नगर्नुहोस् – किनकि साझेदारहरूले तपाईंको फाइदा लिने प्रयास गर्नेछन्। खुशीयाली यात्रा सन्तोषजनक हुनेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।
तपाईंलाई केही मानसिक आघातको सामना गर्नु परेमा धेरै साहस र शक्तिको प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले आफ्नो आशावादी मनोवृत्तिले सजिलै यिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। तपाईंको हँसिलो प्रकृतिले वरिपरिको वातावरण उज्यालो पार्नेछ। तपाईंको रोमान्टिक साथीले तपाईंमाथि चापलूसी गर्ने कुरामा सावधान रहनुहोस् – यो संसारमा मलाई एक्लो नछोड्नुहोस्। आज तपाईंको कार्यस्थल प्रेममय हुनेछ। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। आज भन्दा अघि विवाह कहिल्यै यति सुन्दर भएको थिएन।